Edere site Tranquillus | Apr 25, 2018 | Mmepe onwe onye
Ma na ọrụ ọkachamara gị maọbụ nke onwe gị, ị na-emekarị nhọrọ.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ dị mkpa karịa ndị ọzọ, ịmara otú e si eme mkpebi ziri ezi enweghị ike imezi.
Mgbe a na-abịa ịme nhọrọ, ụzọ abụọ na-emegide, nke abụọ abamuru uru na ọghọm na nke ọzọ na-agụnye ịgbaso nzụlite nke onye.
Iji nyere gị aka ime mkpebi ndị ziri ezi, lee ụzọ abụọ na ndụmọdụ ụfọdụ.
Ụzọ # 1: Ụdị uru na ọghọm
Nke a bụ usoro nke ọtụtụ ndị na-eji eme nhọrọ. Ọ nwere ike ịdị irè n'ihi na ọ na-enye gị ohere ịkọwapụta ihe ị na-emeri nke ọma wee ghara ịhapụ mkpebi ahụ. A na-ekwu okwu, ọ bụ ụzọ nke inye nkọwa nye mkpebi.
Otú ọ dị, usoro a chọrọ oge na ezi ntụgharị uche na nhọrọ ahụ.
O nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ oge niile, naanị na-akpaghasị gị n'ihu.
Ụzọ # 2: Dabere na Nkụzi
A na-ekwukarị na nhọrọ mbụ ị na-eme bụ oge kwesịrị ekwesị.
Na ihe kpaliri anyị ime nhọrọ ahụ bụ nanị mmuo anyị. Ọ bụ echiche dịgasị iche iche banyere ime mkpebi.
Nke a bụ ihe atụ: ị ​​ga-aga na-akọwa A, ị na-ahọrọ ụzọ, mgbe mgbe n'echeghị echiche banyere ya.
Onye na-adabere n'echiche ya agaghị ajụ ajụjụ ọ bụla.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ihe mberede mere na njem a, ọ ga-agwa gị na ọ bụ akara aka.
Ịtụkwasị obi n'omume onye ahụ bụ ịtụkwasị onwe gị obi ma gwa onwe gị na nhọrọ ndị ị na-eme bụ ihe ziri ezi ma dị mma nye anyị.
Nnyocha na-egosi na mkpebi na-enweghị isi na-abụkarị ihe kasị mma, karịsịa mgbe ha metụtara mpaghara a na-achịkwa ma ọ bụ n'ọnọdụ dị ize ndụ.
Ndụmọdụ m maka ime mkpebi ndị ziri ezi:
Ntuziaka # 1: mara otu esi ege ibe gị ntị
Mmetụta gị nwere ike inyere gị aka ime mkpebi ndị ziri ezi. N'ezie, mmetụta uche na-arụ ọrụ dịka mkpuchi nke na-enye gị nkọwa dị mkpa gbasara ọnọdụ ahụ.
Ha bụ ihe ngosi dị mma, ị na-enwe obi ụtọ ma na-enwe obi ụtọ ma ọ bụ na ọ dị mwute na nhụjuanya, mara otú ị ga-esi ege ntị n'echiche gị.
Ntuziaka # 2: Nọgide na-eche naanị ozi ị chọrọ
N'ịbụ nke iju mmiri zuru, ị gaghị enwe ike ịme mkpebi ziri ezi.
Ọ ga-esi ike ịmata ihe dị mkpa na ihe na-adịghị.
N'ihi ya, buru n'uche ihe dị mkpa ma lekwasị anya n'ihe dị mkpa.
Ntuziaka # 3: ịmara otú e si kwụsịtụ
Ịnọgide na oyi kpọnwụrụ na mkpebi ị na-ewe ruo ọtụtụ awa abaghị uru.
Ya mere, kwusi iche echiche ma pụọ.
Nke a ga - enyere gị aka ịhụkwu nke ọma, ị ga - ahụkwa ahụ, ọ bụ n'ezie na oge ahụ na mkpebi ziri ezi ga - apụta.
Mara otú e si eme mkpebi ndị ziri ezi August 23rd, 2018Tranquillus
gara agaKedu otu esi eme ka adịghị ike gị bụrụ ike?
-esonụKedu esi edozi ihe mgbaru ọsọ siri ike?